Ọnwụ Tarot Kaadị Kaadị - - Tarot Kaadị Pụtara
Ntughari Kaadị Kaadị Temperance
Temperance Tarot Card Isiokwu nke ọdịnaya
Ọnwụnwa ahụ Zọrọ Ezi
Ọnwụ Ahụ Agbanwee
Numerology Symbolism nke Obi
Laghachi na Major Arcana
Kaadị Temperance bụ kaadị 'Zen' nke Tarot na otu n'ime mmụọ. N'ọnọdụ nke nguzozi zuru oke, ihe siri ike na-adị mfe na nke agaghị ekwe omume na-ekwe omume.
Tupu ị mara ya, ọnụ ụzọ ị kwenyere na emechiri emechi mepere emepe ma ụzọ ị ga-enweta doro anya na mgbochi ndị a na-apụghị imeri emeri. Ebe o mebiri ọgbaghara dị n'ime, uche gị na uche gị emeghela ugbu a maka ihe ụwa niile nwere inye.
Chei! Mfe na-eme ya ebe ahụ, Ramjet.
Na-agwakọta Ọkụ na Mmiri akara na oke nwoke na nwanyi nke chi, na Temperance tarot na-anọchi anya omume nke iwe iwe, nke o si nweta aha ya. N'ime usoro a, a na-emikpu ọla dị ọkụ n'ime mmiri ka o sie ike ma ọ bụ mee ka ọ dị nro.
Mmụọ ozi Gabriel jikọtara Mmiri, Ọkụ, na chi na otu ọnụ ọgụgụ na kaadị tarot Temperance. Ebe ọ bụ na a na-ejikọta ihe ndị na-emegide polar n'okpuru nduzi Chineke, kaadị tarot Temperance na-egosikwa ọgwụgwọ na mmụọ nsọ.
Igwe anyanwụ dị na brow ya na-anọchi anya ọkụ Chineke na triangle kwụ ọtọ na obi ya, elementrị ọkụ. Na triangle nke agba mmanụ na-ezo aka na mmalite nke anyanwụ, ebe azure nke uwe mwụda ahụ, nke jikọtara na mbara ala Jupiter, na-egosipụta ebere Chineke na Temperance tarot.
E gosipụtara na kaadị tarot nke Temperance na otu ụkwụ na mmiri na otu na ala akọrọ, ọ na-ejikọ uche dị omimi, ọgụgụ isi na onye dị elu.
Mmụọ ozi ahụ emeghewo ụzọ ya iji nweta ihe ọmụma ka elu, nke a na-enyekwa ya ohere ime ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịwụsa mmiri si n'otu iko na nke ọzọ na kaadị tarot Temperance na akụkụ dị otú ahụ na-enweghị ịwụfu otu.
Iko bụghị naanị na-anọchi anya ndị Mmewere nke Mmiri , kamakwa akụkụ nwanyị nke okike, akpa nwa Chukwu.
N'akụkụ aka nri nke kaadị Temperance bụ ubi nke Irises, na-egosipụta uche nke Chineke iru mmadụ. N’aka ekpe, ụzọ a na-egbochighị ka ọ na-eji nwayọ ehulata gawa n’ụzọ gafere n’elu ugwu dị na mbara igwe. Ọ na-eduga azụ na nghọta nke Chineke. Kama inwe echiche ziri ezi megide ibe ha, The Temperance tarot merges polar opposites.
Ezigbo Mgbapụta Tarot Kaadị Kaadị
Azịza na nghọta na-abịakwute gị na ngwa ngwa. Ike na-aga site na gị kpamkpam, na-enweta oge, na-ewuli elu, na-achọta ntọhapụ ya n'oge kwesịrị ekwesị!
Dị ka onye na-agba ụta nke eluigwe Sagittarius , metụtara na tarope Temperance, ị bụrụla akụ na ebumnuche, ịdọrọ na ntọhapụ. Iguzozi, ilekwasị anya, na ijegharị n'ụzọ zuru oke abụrụla otu usoro.
Ọ bụrụ na ị jụọla, ma mmiri ahụ na-esi n’otu aka nri gawa n’aka ekpe ma ọ bụ na-abụghị akụkụ, rịba ama na ọ dị n’ezie iyi abụọ: mmiri ahụ na-aga ma ụzọ abụọ.
Onye nlekọta gị dị nsọ na onwe gị dị elu nọ na nkwurịta okwu zuru oke na ibe gị n'ihi na ị kwụsịrị ịkwụsịla nsonaazụ na nsonaazụ. Na-anụ okwu niile, na ozi ọma dị mma.
nrọ nke ịtụrụ ime na inwe mmetụta ka nwa ahụ na-agagharị
Ichebe nsogbu na-ebute ihe mgbochi n'ụzọ gị, ihe mgbochi ndị a bụ ihe ịsụ ngọngọ, ọ bụghị ịzọ ụkwụ. Ọ na-elekwasị anya na ihe ndị na-ezighi ezi. Hapụ mgbakwunye a na-eme ka uche gị nweta nghọta ọhụrụ.
N'ihi nke a, nghọta ndị a na-ewetakwa nnukwu udo nke uche. Obi iru ala a sitere na ịmara na ị nọ ebe kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị, na-eme ihe ziri ezi - na eluigwe na ala na-azaghachi n'ụdị, na-emeghe ụzọ maka ohere na ihe ịga nke ọma.
Udo nke obi bia nma. Gabriel bụ dibịa eluigwe ma ya mere, kaadị a na-abụkarị ozi nke ọgwụgwọ na ọkwa niile nke ịdị adị gị. Dị ka ndị Rom oge ochie si kwuo, ahụ dị mma na-arụpụta ezi ahụ ike. Uche zuru oke nwekwara ike ịgwọ ahụ mmadụ.
Ọnọdụ Ọnwụnwa Na-agbanwe Agbanwe Tarot
Ọ bụ na ị na-enwe mmetụta site na ozi ndị ị na-enweta ma ọ bụ na ịnweghị ike ịnagide ìhè ahụ? Mmụọ ozi gị na-eguzo n'ihu gị n'ebube ya dị ebube, dị ka Roma Downey na mmụọ ozi metụrụ ya aka, na-agwa gị na eluigwe na ala hụrụ gị n'anya.
Ma ị na-enwe obi abụọ, ọ bụ ezie na ozi a na-abịa site na elu. E kwuwerị, gịnị ga-ahụ gị n'anya?
A otutu ihe ị na-eche.
Na-etinye uche na ihe niile na ndị niile gbara gị gburugburu nke na ị na-eleghara onwe gị anya ruo n'ókè nke mmegbu. Na-echegbu onwe gị banyere ihe na-eme ndị ọzọ obi ụtọ na ihe ha na-eche, ị gbafuola onwe gị chọrọ na mkpa gị.
Na-agba ọsọ na efu site na itinye ọkụ ebe niile, na-abanye na shea gị n'oge na-ekwesịghị ekwesị ma na-ewe iwe ọkụ na-atụghị anya ya. Nke ahụ bụ n'ihi na ahụ na uche gị na-agba mbọ na-adọta brekị, na-emeghachi omume na anụ ahụ ma ọ bụ ọbụna ọrịa uche.
I nwere ike ịna-eche ihe mere ndị mmadụ jiri na-achụ gị, n'agbanyeghị ihe niile ị na-emere ha. Nke bụ eziokwu bụ na ọ dịghị onye na-enwe mmasị na martyr.
Ikwesiri ịlaghachi na etiti gị ka ị nwee ike idozi ihe n'onwe gị. N'ezie, nke ahụ bụ ihe nzuzo alchemical nke Onye Ọkà Ihe Ọmụma Ihe Nkume, ihe omimi dị omimi kwuru na ọ ga - eduga na ọla edo - yana ụkpụrụ dị mkpa nke kaadị a gụnyere. Ọbụna ma ọ bụrụ na alchemy abụghị gị iko tii, nke a bụ ihe atụ dị ike.
Nke a bụ usoro: Ime njem gaa n'ime ụwa. Site na usoro mgbazi, ị ga-achọpụta nkume zoro ezo.
Ihe ị na-agbazi bụ echiche gị banyere onwe gị: are dị mkpa, yana ihe ị chọrọ na mkpa gị dị oke mkpa.
Da dị ka ogwu siri ike ilo? Ọ bụ ya mere okwu Latin nke mbụ (nleta site na imezi ihe dị n'ime ụwa ga-ahụ nkume zoro ezo) edebiri aha ya VITRIOL.
Ọgwụ a nwere ike ilu, mana n'ikpeazụ ọ ga-eweghachi ahụike gị.
The Temperance Tarot Card Metaphysical Akwụkwọ ozi:
Zodiac ịrịba ama: Sagittarius
Akwụkwọ Ozi Kabbalistic: Otu ihe
Zọ nke Osisi Ndụ: Tipheret (Mma) ka Yesod (Ntọala)
Kristal Healing: Malachite, Tektite
nwoke aries na nwanyi cancer n’akwa
Kaadị Temperance & Tarot Numerology
The kaadị tarot nke Temperance bụ isi iri na anọ Major Arcanum. 14 nwere 1 (ọkụ anyanwụ) na 4 (nkwụsi ike na nguzozi), ma gbakwunye ọnụ, ọnụ ọgụgụ ndị a na-eme Nọmba 5 (1 + 4 = 5), na-egosipụta mmegharị mberede na ụzọ ọhụrụ.
nwoke libra na nwanyi nwanyi libra
bụ gemini na cancer ezigbo egwuregwu
nwoke leo na nwanyi leo nwanyi